गालीको आविष्कार, गुटको घोचपेच, कटाक्ष, व्यंग्यवाण, हुर्मत काढ्ने शिक्षा लिनु छ भने नेपाली कम्युनिस्टलाई गुरु मान्दा हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण मानवतावादको रक्षक हो तर नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा तिनले सबभन्दा चर्को दुश्मन आफ्नै पार्टीभित्र खोज्छन्, देख्छन् । तयार पार्छन् । अनि अक्करमा ठक्कर दिँदै सँगालेका तुषको बदला लिन्छन् । हुन त इख नभएको मान्छे र विष नभएको सर्पको के काम भन्ने गरिन्छ । तर, उच्च आदर्शमा रही पूर्ण मानवसमाजको कल्पना गर्ने नेपाली ‘कम्युनिष्टमै’ यो समस्या अझ बढी छ । तब के यो आदर्श कतै शक्ति आर्जनको भ¥याङ त होइन ? भन्ने हुन्छ । आलोचनात्मक चेत बोली पासो कि ! गल पासो ! सरकारी भूमिकाबाट च्यूत पारिएका वा ०५४ मा पार्टी विभाजनको पीडा खेपेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईजस्तै क–कसले थप भुक्तमान भोग्नुप¥यो ! अहिले पार्टी एकता गर्ने पुराना माओवादीले यो कुराको हेक्का राखेका छन् ? जनयुद्धका बेला वा पछि माले÷एमाले त्यागेर माओवादी बन्नेहरूको राजनीतिक हीनताबोध आगामी दिनमा कसरी देखिने हो, कुन्नि !